Kedu ụzọ kacha mma SEO maka ụzọ ka ukwuu?
Nke a bụ ụfọdụ ụzọ e si egosipụta SEO maka ụzọ dị ịrịba ama na ịba ụba. Jide n'aka na ị ga-eleba anya nzọụkwụ isii ndị a dị mfe dị n'okpuru:
Nyocha data njirimara
Chefuo njikwa Nyocha Search Engine. Ee, ihe mgbaru ọsọ bụ isi nke òkè ọdụm nke ụzọ SEO na-eme ka nchịkwa ígwè search engine dị mma karị. N'otu oge ahụ, njikarịcha ọchụchọ bụ maka iru mkpa nke ndị na-ege gị ntị; M na-ekwu nanị ịchọta ihe ndị mmadụ na-achọ, ma nye ha ha ọdịnaya gị. Ya mere, nke ka mma ị maara ndị na-ege gị ntị, otú ahụ ka ị na-enyekwu ọrụ onye ọrụ - free windows server 2008 vps. Nke a kwesịrị iduga ọkwa dị elu na SERPs. Ụzọ kachasị mfe ị ga - esi mesoo nke a na-agwa ndị ọbịa gị okwu, ana m atụ aro ịza ajụjụ ha ọtụtụ ugboro na isiokwu dị mkpa, kwadoro ya na ndị ọrụ ndị ọzọ na - enyekwa ha ngwọta. Ozokwa, ọ ga-abụ nnọọ ihe dị mma iji dozie ya-kọwaa ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị bụ isi iji jiri ha mee ihe maka ndị nkụnye eji isi mee nke gị blog posts.
Na-arụ ọrụ na ọdịda peeji nke
Kachasị, mgbe ejiri njikọ gị na ndepụta nke SERPs , ndị mmadụ na-aga na saịtị weebụ ma ọ bụ blog nkwado gị. Ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ azụmahịa, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ ga-akara gị mma ịnweta peeji nke ọdịda pụrụ iche na nke kachasị mma ka ịmepụta ahịa ka mma ma ọ bụ karịa ndị na-eso ụzọ. Ịmepụta ebe ọdịda pụtara ịnweta ihuenyo raara onwe ya nye nke otu isiokwu. Banyere ịbịakwute peeji nke SEO, m nwere ike ikwu na ị na-eme atụmatụ niile kachasị mma. Nke mbụ, tupu ịmalite ịmepụta ebe ọdịda, ị ga-achọ ịchọta mkpịsị ugodi nke ogologo-tail. Ụzọ ahụ, na-arụ ọrụ na aha ya na nkọwa meta. Enwela ebe ị ga-esi rute ebe ọ dịkarịa ala 2,000 okwu, ebe ọ bụ ebe e gosipụtara dị ụtọ maka ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ Google. Ejila aka tinye ego n'emebe ihe ngosi weebụ. N'ikpeazụ, gbalịa ịnweta nlegharị anya maka ọdịda gị ma nwee mmasị ịnọ n'ocheeze ahụ.
Dezie ọdịnaya gị
Ezi ụzọ SEO maka ọdịnaya dị na otu echiche dị mfe - ọdịnaya bụ eze. Ee, enwere m ike n'ebe a, ebe ọ bụ ezi echiche na ị ga-arụsi ọrụ ike maka ọdịnaya gị iji nweta akwụkwọ kachasị mma na ezigbo ahụmịhe ọrụ. Ka o sina dị, ọ ga-abụ nnọọ ihe zuru ezu ma na-arụ ọrụ oge. Kama ime nke a, m na-atụ aro ka ị na-etinye ụfọdụ ụzọ SEO dị mfe maka ederede ederede gị. Nanị jiri otu ọdịnaya ahụ gbanwere n'ụdị dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ka egosiputa maka ịrụ ọrụ nke ọma ma dị mma. Echere m na ị ga - enwe ike ịmegharị bọtịnụ blog gị (ọ dịkarịa ala akụkụ) n'ime nkuzi vidio bara uru, ihe ngosi na-akpali akpali, ezigbo pọdkastị, na infographics, ma ọ bụ ihe nkwado ụfọdụ na PDF. Maka mmetụta kachasị elu, mee ka akụkụ ndị ahụ bara uru dị na ya bara uru iji nweta njikọ na okporo ụzọ. Ị gaghị akwa ụta maka itinye oge na nke ahụ.